(Daawo) Aadan Barre oo sheegay in Jubbaland Xariir Gaar ah ay la leedahay Kenya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News (Daawo) Aadan Barre oo sheegay in Jubbaland Xariir Gaar ah ay la...
(Daawo) Aadan Barre oo sheegay in Jubbaland Xariir Gaar ah ay la leedahay Kenya
Xildhibaan Aadan barre Ducaale oo ka mid ah Xildhibaanada ka socda dowladda Kenya ee ka qeyb galaya Xafladda caleema saarka Madaxweynaha dowlad goboleedyadda Jubbaland ayaa sheegay in Dowladda Kenya iyo Jubbaland uu ka dhaxeeyo xiriir gaar ah.
Waxaa uu sheegay in dowladda Kenya iyo Jubbaland ay ka wada shaqeeyaan Ammaanka Xadka ay wadaaggaan labada dhinac.
” Jubbaland iyo dowladda Kenya waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan oo aad u wanaagsan oo ku aadan wada shaqeynta dhanka Ammaanka, waxaana hambalyo u diraynaa Madaxweynaha Jubbaland” ayuu yiri Aadan Barre Ducaalle.
Waxaa uu tilamaamay in Jubbaland ay muhiim u tahay Ammaanka Qaranka Kenya.
Previous articleXukumadda oo ka welwelsan Go’aankii ay ka qaadan laheed kenya ka dib Diyaaradahii Tegay Kismaayo
Next article(Toos u daawo) Daawo xafladda caleema saarka MW Axmed Madoobe
Dowladda Farmajo oo shatigii kala laabatay shirkado Kenyan ah, shati cusubna siisay shirkad Itoobiya laga leeyahay